Kaydka soomaaliya wuxuu marti ku yahay gudaha hab maktabeedka Jaamacadda (SBA) ee Roma Tre in ARCADIA.
Macluumaadka kaydkani waxay u kaydgashanyihiin una kooxaysanyihiin qaybaha soo socda:
Buugaag, Cutubyo buugaag, Maqaallo (majallado), Qoraallo aan horay loo shaacinin, Sawirro, Maqal (cajalado), Maqal-muuqaal. Mawduuc kasta oo halkan ku jira waxaa la socda xog raadraac oo kaamil ah, nuxurka qoraalka (abstract), ereyo fure ah, mulaaxadooyin iyo abla’ablaynta mawaadiicda qaarkood. Qayb kastoo ka mid ah kaydka waxaa ku lifaaqan mid ama in ka badan oo fayl ah (oo PDF ama qaab kale ah) oo la xiriira qoraalka iyo/ama macluumaadka warbaahinta kala duwan.
Shayga aad damacsantahay in aad ka dhex hesho kaydka waxaad ku raadin kartaa: Qoraha (magaciisa), cinwaanka, mowduuca, abstract, ereyo fure, bedka uu ka midka yahay mowduucu iyo luqadda.
Bededka mawaadiicda ee la adeegsaday waxay kala yihiin: culuunta beeraha, antrooboolojiga, arkiyooloojiga iyo taariikhda, fanka iyo sawirrada, waxbarashada, qaamuusyada iyo ereybixiye (glossary), dokumentooyin, juqraafi, suugaan, cilmi-afeed, cilmiga daawada, muusiko, siyaasad, diin, ururin raadraacyo, ilo dhaqaale, culuunta dabiiciga, ciyaaraha (sport). Arrimahan warbixintooda waxay ku qoranyihiin saddex luqadood: talyaani, soomaali iyo ingiriisi.
F.G. Magacyada hab qoraalkooda waxaa loo adeegsaday sida qoraal walba ay ugu dhex muuqdaan; sidaa darteed , isla qore ayaa suurtaggal ah in mar loo qoro habka far soomaalida (sida Cali...), marna sida ay reer galbeedku u qoraan (Ali...) (inta badanna soomaalida ayaa sidaa u adeegsata). Taasina waxay keeni kartaa in mararka qaarkood loo baahdo in dhowr jeer la sameeyo raadinta shayga la doonayo.